मिति फेरिँदैमा जीवन फेरिदैन - विवेचना
मिति फेरिँदैमा जीवन फेरिदैन
April 14, 2019 79 Views
आजदेखि नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको छ । नेपाल र नेपालीले २०७५ साललाई बिदा गरेका छन् । २०७६ सालको सुरुवाती दिन आज नेपालीले नयाँ वर्षका रुपमा मनाउँछन् । नयाँ वर्ष नेपालीका लागि उमङ्गको चाड पनि हो । नेपालीको आफ्नै आस्था, विश्वास र समर्पणले नयाँ वर्ष उल्लासमय बन्ने गरेको छ । नयाँ वर्षमा नेपालीले अनेक योजना बनाउँछन् । सहरिया नेपाली घुमघाममा रमाउँछन् । ग्रामीण परिवेशमा पनि नयाँ वर्षको रौनक कम हुँदैन । नयाँ वर्ष मनाउने नेपालीका शैली अनेक छन् । सबैले आफ्नो चाहना अनुसार नयाँ वर्ष मनाउँछन् ।
एउटा वर्ष सकिएर अर्काे वर्ष आउनु वा १२ महिनाको चक्र पूरा हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । यो नियमित प्रक्रिया हो । विश्वमा रहेका मानिसले आफ्नै शैलीमा नयाँ वर्ष मनाउँछन् । शैली फरक भएसँगै तिथिमिति पनि फरक हुन्छ । सबैका लागि नयाँ वर्ष परिवर्तित मिति मात्रै हो । यो कुनै नयाँ सिर्जना होइन । हरेक दिन उज्यालो हुन्छ अनि रात पर्छ । सृष्टिको समय संरचना स्थिर छैन, मिति फेरिन्छ, सत्यतामा घडीको सुई सधैँ घुमिरहन्छ । मिति फेरिँदैमा जीवन फेरिन्छ भन्ने पनि होइन ।
मानिसका कर्महरु जब फेरिन्छन्, तब जीवन फेरिन्छ । जीवन फेरिनु भनेको सुख मात्रै होइन, दुख पनि हो । मानिसको भोगाई सुखको अपेक्षा र दुखको निराकरणमा अडिन्छ । त्यसैले पात्रोले मान्छेको उमेरमा उतारचढाव मात्रै ल्याउने हो, नयाँ गति तय गर्ने होइन । मान्छे भित्रको अठोटले मात्रै जीवनको गति तय हुन्छ । नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने, नयाँ सङ्कल्प गर्ने र आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एउटा माध्यम नयाँ वर्ष हुन सक्छ । मान्छेको अठोट र सङ्कल्प नफेरिँदासम्म नयाँ सालले केही दिने होइन । दिन्छ भने आत्मरति दिन्छ । जीवनमा परिवर्तनका धर्सा कोरिन इच्छाशक्ति प्रमुख कुरा हो ।
मान्छे परिवर्तन हुन खोज्छ, तर सक्दैन । सक्छ भने दृढ सङ्कल्प र प्रतिज्ञाले मात्रै सक्छ । आत्मचिन्तनको विकास भयो भने मात्रै नयाँ वर्ष सार्थक हुन्छ । पुरानै शैली, व्यवहार र संस्कारले नयाँ वर्ष सार्थक हुँदैन । नयाँ हुनु भनेको पुरानै चीज होइन, फरक व्यवहार, जीवन र बास्तविकता पनि हो । नयाँ वर्षले जीवनका उद्देश्यहरु निर्धारण गर्नु पर्छ । जीवनमा मान्छेले जब प्रण गर्छ, त्यो पूरा गर्ने दायित्व पनि उसैको हो । नयाँ वर्षले आपसी द्वेष, तिक्तता र रिसराग अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ, त्यसैमा मानवीय हित निहीत छ । नयाँ वर्ष २०७६ सबै नेपालीका लागि सुखद् रहन सकोस्, हाम्रो पनि अभ्यन्तरिक शुभकामना छ ।
Previous लुक्लामा विमान दुर्घटना : मृतकको सङ्ख्या तीन पुग्यो
Next बाँसघारीमा भेटियो पेस्तोल र गोली
August 16, 2017 206,476
August 19, 2017 23,316
Yt Mp3: Yt Mp3 [...]Here isagreat Blog You may Uncover Exciting that we Encourage You[...
Yt Mp3: Yt Mp3 [...]alwaysamajor fan of linking to bloggers that I really like but don...
gay men with toys: gay men with toys [...]Wonderful story, reckoned we could combineahandful of u...
Yt Mp3: Yt Mp3 [...]that would be the finish of this article. Right here youll obtain s...
mp3 download: mp3 download [...]usually posts some incredibly fascinating stuff like this. If...